Gudoomiyaha Baarlamaanka oo ka hadlay Go’aankii Madaxweynaha ee ahaa in la baarayo Xildhibaanada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyaha Baarlamaanka oo ka hadlay Go’aankii Madaxweynaha ee ahaa in la baarayo Xildhibaanada
10th February 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxa’ed Sheekh Cusmaan Jawaari oo Maanta Shir Gudoomiyay Kulan ay Xildhibaanada ku yeesheen Xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu soo hadal qaaday Hadalkii Madaxweynaha ee ahaa in la baarayo Xildhibaanada.
Gudoomiye Maxa’ed Sheekh Cusmaan Jawaari, ayaa waxa uu tilmaamay in isaga iyo Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmarke ay kawada hadleen arinta ku saabsan Baaritaanka Xildhibaanada, waxaana uu sheegay inay isla garteen dhowrsista Xasaanada Xildhibaanada Soomaaliya.
Wuxuu sheegay Gudoomiyaha Baarlamaanka inuu ka codsaday Ra’iisul Wasaaraha inuu amar ku siiyo Laamaha Amaanka dalka iyo Ciidanka AMISOM inaan la baarin Xildhibaanada, inta ay Mas’uuliyiinta Hay’adaha amaanka wax ka waydiinayaan Baaritaanka.
Dhanka kale, Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa Maanta waxay sameeyeen akhrinta saddexaad ee Sharciga Maareynta Masiibooyinka, iyadoo Xeer-hoosaadka Baarlamaanka uu tilmaamayo in Sharciyada loo soo gudbiyo Xildhibaanada ay maraan akhrinta 1-aad, 2-aad iyo 3-aad kadibna la meel marinayo.
Ugu danbeyntii, Mudaniyaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa horyaalla Ajandooyin badan oo loog afadhiyo inay ansixiyaan kahor inta aan la gaarin Doorashada Bisha August.